Ururka Macallimiinta Qaranka ayaa soo saaray warsaxaafadeed ka kooban 16 qodob oo ku socda Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somaliland. | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ururka Macallimiinta Qaranka ayaa soo saaray warsaxaafadeed ka kooban 16 qodob oo ku socda Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somaliland.
Published on August 19, 2021 by sdwo · No Comments
Bayaanka oo taabanaya dhinacyo badan oo kala geddisan ayaa u dhignaa sidan:
1. Wasaaraddu ha ka dignaato laalista heshiisyada sharciga ah ee lala galo shirkadaha, haayadaha iwm
2. Urur ahaan waxa aanu soo jeedinaynnaa in la saxo qaabdhismeedka wasaaradda. Nin uu wasiir magacaabay ayaa ku-xigeenku eryayaa, sida Guddoomiye waxbarasho oo gobol. Xeerjebin ayaa aannu u aragnaa
3. Waxanu ku baaqaynnaa in la siiyo lacagtooda bareyaasha dib-u-eegista iyo tifaftirka ku sameeyay manhajka 2021ka, waxa ay hawshooda dhammeeyeen dhammaadkii Juun 2021ka, laba bilood ayaa la meermeerinayaa. Waxa loo diray hawl adag oo aan hal shilin loo haynnin
4. Waa in xal laga gaadho khilaafka wasaaradda ragaadiyay ee u dhexeeya wasiika iyo agaasimaha guud, kaas oo cubbadhawray shaqadii qaranka. Wasiirku waxa uu xilka yimi isaga oo bacaysan, taladiina waa uu maroorsaday
5. Wasaaraddu yay bareyaasha u ciqaabin arrimo aan waxbarashada khusaynnin, sida dhul ay qoyska madaxweynuhu xoog ku qaadanayaan, qoraallo ay Facebook ku qoreen iyo wax an sakaaro ka biirsannin
6. Waa in noolka la bixiyo bareyaasha dhammaystay Dugsiga Tababarka Macallimiinta, isla markaana la siiyo mudnaanta shaqada ee macallinnimo. Laba sanno ayay tababar ku jireen, halka ardayda shaqo qaran ay 6 bilood tababar qaataan
7. Wasaaradda waxbarashadu ha xurmayso xeerka shaqaalaha dawladda ee dhigaya hannaanka anshaxmarinta ee sharciga ah. Waa foolxumo in la arko shaqaale anshax marinaya shaqaale kale.
8. Wasaaradda waxbarashadu ha ilaaliso xuquuqda shaqaalaha, tababarrada macallimiinta iyo xaaladaha ku gedaaman shaqaaleweynaha hoos taga maamulkeeda.
9. Waxa aan ku baaqaynnaa in halkiisa lagu hakiyo waxkabeddelka aan muqarrarka waafaqsanayn ee manhajka lagu sameeyay 2021. Waa mid qas iyo qalalaase ku ah waxdhigista iyo habraaca manhajka
10. Waa in ay meel isugu biyoshubtaan dharka ardayda ee weli qalaamarogadka ahi
11. Marka waxbarashada loo magacaabayo guddoomiye gobol, ha laga fuuryeelo cidda saaxadda barashada iyo barbaarinta ku jirta, tusaale ahaan Guddoomiyeha waxbarashada Awdal wuxuu shaqaale k ahaa wasaaradda arrimaha gudaha.
12. Caydhinta masuuliyiinta ee degdegga ahi waxa ay sababaysaa in shaqadi curyaanto, ha la joojiyo magacaabista iyo maagista aan cilmiga ku dhisayn. Jago qudha aya sannad gudihii 4 qof isaga dambeeyaan.
13. Wasaaraddu yaanay sabab la’aan u eryin ardayda deeqda waxbarasho ka heshay Itoobiya, waxa ay la kulmeen awoodsheegasho sharcijebin ah
14. Waxa aannu raalligelin buuxda siinaynnaa xildhibaannada qaranka ee Wasiir Toorno aflegaaddeeyay iyaga oo kala hadlay dan ummadeed
15. Waxa aanu soo dhawaynaynnaa in Golaha Wakiillada Somaliland u yeedhaan Wasiirka Waxbarashada, la xisaabtamaan oo qalloociisa farta u saaraan
16. Wasaaradda waxbarashadu waa inay hubiso dugsiyada keensada bareyaal shisheeye ah oo dhiga casharro ay macallimiinta dhaladka ahi bixin karaan.
Afhayeenka Ururka Macallimiinta Qaranka Somaliland